राजनीति Archives - जुनेली न्युज
कोरोना जितेर ३६ दिन पछी ग्रान्डी अस्पतालबाट कांग्रेस नेता मीन बिश्वकर्मा डिस्चार्ज
मंसिर १४, काठमाडौं । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनीधी सभा सदस्य मीनबहादुर बिश्वकर्मा ३६ दिनको उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि ३६ दिनअघि कात्तिक ८ गते वीर अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचारकै क्रममा श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिएपछि उनलाई कात्तिक ११ गते धापासीस्थित ग्रान्डि अस्पतालमा सारिएको थियो । उनलाई कोरोना परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ […]
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी शुक्रबार बस्दै
कात्तिक १३, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०७७ कात्र्तिक २१ गते शुक्रबार दिनको १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, ललितपुरमा बस्ने भएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा छलफल हुने भएको […]
दशैमा जिल्ला नछाड्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गृहको निर्दैशन
कात्तिक ०४, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दशैमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार एक सूचना मार्फत यस्तो जनाकारी दिएको हो । चाडवाड्मा कोरोना संक्रमण थप फैलिन सक्ने भन्दै कोरोना रोकथाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिका हुने भन्दै उनीहरुलाई जिल्ला नछाड्न आग्रह गरेको हो । त्यस्तै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि […]
असोज २९ काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आज बिहिबार बिहान शपथ लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मन्त्री पदका लागि सिफारिस भएका नवनियुक्त तीन मन्त्रीले आज शीतल निवासमा शपथ लिने तय भएको हो । नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अर्थ मन्त्रालयमा विष्णुप्रसाद पौडेल,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । रक्षा मन्त्रालयमा […]
बृहत् प्रजातान्त्रिक माेर्चा निर्माण गराैं : कमल थापा
असोज २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणको आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष थापाले देशमा भइरहेको ब्रह्मलुट, सर्वसत्तावाद, धर्म परिवर्तन, विदेशी चलखेल पराजित गर्न तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन मोर्चा निर्माणको आह्वान गरेका हुन्। थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न […]
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार
असोज २५, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति विस्तार भएको छ । पार्टी एकिकरण भएपछि ३२७ जना सदस्य रहेको कार्य समितिमा आज ४०० जना थप भई ७२७ जनाको केन्द्रीय कार्य समिति निर्माण भएको हो । एकिकृत पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि पहिलो पटक केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार भएको राप्रपाले जनाएको छ । सो […]
कांग्रेसको केन्द्रीसमिति बैठक स्थगित
c असोज २४, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार पर्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं अग्रज समाजसेवी रामवावु प्रसाई (खनुपरूदे प्रकाहा) को निधन भएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसले जनाएको छ । बैठक आइतबार असोज २५ गते २ बजे बस्ने भनिएको थियो । शनिबार मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल […]
डा. गोबिन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कोटेश्वोरमा काँग्रेसको बिरोध प्रदर्शन
असोज २२ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ। अनशनरत डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको २५ दिन हुँदा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको भनि जीवन रक्षाको माग गर्दै काठमाडौंको कोटेश्वर चोकमा कांग्रेस नेता कुन्दनराज काफ्लेको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछिको कोणसभामा काफ्लेले केसीका माग अबिलम्ब पुरा गरेर उनको जीवन रक्षा गर्न माग गरे। केसीको मेडिकल […]
उमाकुण्डमा अस्थायी कोरोना अस्पताल संचालनमा : उपलब्ध सेवा निश्वर्थ प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रतिबद्धता [फोटो]
असोज १९, रामेछाप । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रमा अस्थायी कोरोना (कोभिड-१९) अस्पताल सोमबारदेखि संचालनमा आएको छ । नेपाल सरकारको प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्थायी कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याउने कार्ययोजना अन्तर्गत अस्पताल संचालनमा आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासको अधिकृत ईश्वरी प्रसाद सुवेदीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र सरकारबाट दुई जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको अस्पताल सुरुभएको हो । गाउँपालिकाभित्र ५ शैयाको […]
कोरोना कहरले : नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्तिचकालका लागि स्थगित
असोज १८, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका ६ जना सदस्य र ७० सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सचिवालय धेरै सदस्यहरुलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै किसिमका भेटवार्ता बन्द गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री, पत्नी राधिका र दुई […]
नेकपाको सचिवालय बैठक आज ४ बजे बस्ने
असोज १७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज (शनिबार) दिउँसो अपरानह् ४ बजे बस्ने भएको छ । शुक्रबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति हो । सरकारले गत बिहिबार युवराज खतिवडालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने र शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने लगायतका निर्णय पार्टीमा […]
डा . निर्मलकुमार विश्वकर्मा दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत सिफारिस
सरकारले डाक्टर निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका ९ का विश्वकर्मालाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। विश्वकर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालय र स्विट्जरल्याण्डको ज्युरिच विश्वविद्यालयबाट (स‌ंयूक्त) फुड मुभमेन्टमा पिएचडी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट विश्वकर्मा तत्कालीन नेकपा एमालेको विदेश विभागमा १० वर्ष […]